Galmudug oo sheegtay in ay la wareegtay Guriceel - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Galmudug oo sheegtay in ay la wareegtay Guriceel
Galmudug oo sheegtay in ay la wareegtay Guriceel
Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa sheegay in ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo saaka ay ka fuliyeen howlgal lagu soo celinayo magaaladaas gacanta dowladda.
Wasiirka Warfaafinta maamulka Galmudug Axmed Shide Falag ayaa sheegay in ciidanka Galmudug ay la wareegeen gacan ku heynta magaalada.
Rasaas goos goos ah ayaa laga maqlayaa banaanka magaalada oo la sheegayo in ay ku sugan yihiin kooxdii Ahlu sunna ee magaalada laga saaray.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Ahlusunna oo ay kula dagaallameen ciidanka dowladda Guriceel.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulan la qataay Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobey
Next articleCiidanka Ahlusunna oo dib ula wareegay Guriceel